စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ တောင်အာဖရိကစိတ်လှုပ်ရှားတစ်ပြည်, မတူကွဲပြားမှု, နှင့်ကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအရေးပါမှု. ထိုသို့အနီးကပ်မှခန့်မှန်း 17 သန်းဧည့်သည်တောင်အာဖရိကမှတစ်ဦးတည်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကခရီးထွက်, နှင့်ဤအရှိဆုံးဖွယ်ရှိဒီနှစ်ကြီးထွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်. It’saplace of beautiful…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ အတိတ်ကာလကျော် 10 နှစ်ပေါင်း, သန်းပေါင်းများစွာကမီးရထားယူသည်မည်မျှအကျိုးရှိနေသေးတယ်ပါပြီ! စိမ်းလန်းသော၏ကြွယ်ဝသောလယ်ကွင်း, တောက်ပကမ်းရိုးတန်းနှင့်ခရီးသွားလက်ကမ်းစာစောင်များသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်များတွင်ဖော်ပြထားသောဘယ်တော့မှဖြစ်ကြောင်းယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့တောင်တော်သို့ကျောက်တန်း. ရထားယူပြီးပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်, အဆင်ပြေပြေနဲ့တစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်-ဖော်ရွေလမ်း…